Ukuze kuveta inombolo VIN of isithuthuthu uzodinga kuqala ukuthola inombolo VIN. Inombolo VIN uhlukile kulelo ngesithuthuthu esithile esisodwa futhi azikho izinguqulo ezimbili ziyefana.
Hlola Vin Number Lapha
By kulungiswa inombolo VIN kunoma iyiphi bike noma atv, ungafunda okuningi mayelana bike, such as who the manufacturer is and the country it was manufactured. Lezi ngokuvamile zokuqala ezintathu izinhlamvu nezinombolo kwi plate VIN.
Eyesine ngokusebenzisa eziyi lwesishiyagalombili libhekisela imininingwane mayelana ibhayisikili ezifana isitayela umzimba kanye engine uhlobo. Decoders Iningi lolu lwazi lutholakale, kodwa ngezinye izikhathi kuzodingeka ukuba uxhumane umenzi ukuze uthole lonke ulwazi.
The idijithi lesishiyagalolunye ibekwe phezu bike for isiqinisekiso ngezinhloso futhi iziqinisekiso ukuthi VIN luqotho.
The idijithi yeshumi lenzelwe unyaka imoto Yenziwa. A nge Y kukhona like izimoto kanye ukhombise iminyaka kusukela 1980 ukuze 2000. Ibhayisikobho 2001 ukuze 2009 eziyi kuyoba 1 ngokusebenzisa 9 futhi sifana ngalowo nyaka. Ibhayisikobho 2010 beqala alfabhethi aphinde njengoba kusuka 1980 ukuze 2000.
Ukuze uthole omunye Yamaha umhlabeleli, Kawasaki, Suzuki Motorcycle futhi Harley Davidson Vin Decoders hlala ubukele indawo yethu.
Motorcycle Vin Hlola Futhi ATV Vin Hlola